Siza > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Thayipha isifo sikashukela esingu-2 nokuthi yisiphi isici saso
Ushukela wegazi lomuntu
Izimbangela nezimpawu zokuncipha koshukela wegazi I-Hypoglycemia ibonakaliswa ngokuncipha koshukela wegazi ngaphansi kuka-2.8 mmol / L. Amaseli womzimba awatholi inani lamandla adingekayo, okuholela ekufeni kwawo. ...
I-Gestationalabetes mellitus (GDM): ingozi yokukhulelwa “emnandi”
Isifo sikashukela kwabesifazane abakhulelwe kanye nemiphumela enganeni Kwezinye izimo, abesifazane abakhulelwe bane-gestationalabetes mellitus (GDM). Le ndlela yalesi sifo ingavela kuphela ngesikhathi sokukhulelwa, bese inyamalala isikhashana ngemuva kokubeletha. ...
Ukwelashwa Kwesifo Sikashukela Steroid
dverisvm.ru Ukuthuthukiswa nokusetshenziswa kwama-steroid ngonyaka ka-1940 kuye kwaba isimangaliso sanamuhla ngezindlela eziningi. Banegalelo ekululameni ngokushesha kweziguli eziningi ezinhlobonhlobo yezifo. ...
Izindlela zokunciphisa ushukela wegazi ngokushesha nangokuphepha I-Hyperglycemia ingukuqukethwe okwandisiwe koshukela egazini, okungamane nje kukhathaze inhlala-kahle yomuntu, kodwa futhi kugcwele izinkinga ezinkulu. ...
Isifo sikashukela kwabesifazane, abesilisa nezingane
Ukuhlukaniswa kwe-WHO: isifo sikashukela
Ukuhlukaniswa kwesifo sikashukela Ukuhlukaniswa kwe-WHO kwamukelwa njengamanje, ngokusho kwehlukaniswa izinhlobo ezilandelayo zesifo sikashukela: I. Uhlobo 1 lwesifo sikashukela: A. Autoimmune B. Idiopathic II. Thayipha isifo sikashukela esingu-2, i-III. ...
Ukubekezelelwa kwe-glucose kukhubazekile, kuyini futhi kubangela ukwephulwa
Ukubekezelelwa kwe-glucose kukhubazekile, kuyini nokuthi yini imbangela yokwephulwa Siphakamisa ukuthi ufunde le ndatshana esihlokweni: "Ukubekezelelwa kwe-glucose, kuyini nokuthi yini imbangela yokwephulwa," ngamazwana avela kwabachwepheshe. ...
Ukuzivocavoca kwabanesifo sikashukela
Izinzuzo zokuzivocavoca kwabanesifo sikashukela Indlela efanelekile emakilasini wezokwelapha izosiza ekuthatheni ngokushesha nangokwethembekile izinhlobo ezi-2 zesifo sikashukela esilawulwa. ...
I-Diabetes mellitus MODY: Izimpawu nokwelashwa kwe-pathology
Isifo sikashukela se-Modi - izimpawu, izinhlobo kanye nezindlela zokwelashwa Akusilula ngaso sonke isikhathi ukuthola uhlobo lwesifo sikashukela, ngoba kunokuhlukahluka kwalesi sifo, izinkomba zaso ezingabalwa ngazo zombili izinhlobo zokuqala nezesibili. ...
Izimpawu zesifo sikashukela kubantu besifazane konke kusendatshaneni esisodwa. Isifo sikashukela kubantu besifazane siyanda kweglucose yegazi. Yishukela eliletha amandla namandla emizimbeni yethu. ...
Isifo sikashukela - yiliphi izinga loshukela wegazi okulesi simo? Yini okufanele icatshangwe ngesikhathi sokwelashwa?
Amazinga kashukela wegazi we-prediabetes Uma isiguli sitholakala sine-prediabetes, izinga likashukela wegazi lisebangeni ukusuka kumayunithi angama-5.5 kuya kwayi-6.9. ...
I-Diabetes mellitus: Ukuxilongwa isifo sikashukela
Ushukela wegazi okhuphukile Ushukela wegazi ophakanyisiwe: thola izimbangela zawo, izimpawu, futhi okubaluleke kakhulu, izindlela ezisebenzayo zokwelashwa ngaphandle kokuzila, ukuthatha izidakamizwa eziyingozi nezimbizayo, imijovo yemithamo emikhulu ye-insulin. ...
I-mellitus yesifo sikashukela engakhokhwanga: izibonakaliso, ukwelashwa nokuthi yikuphi okuyingozi
Isifo sikashukela esinqunyiwe Enye yemiphumela emibi kakhulu yokushoda kwe-insulin emzimbeni ukubola kwesifo sikashukela, okuthi, uma kungafanele noma kungafanele, kungaholela ku-hyperglycemic coma nokufa. ...
Isifo Sama-21 Skhulu: Uhlobo Lwesifo Sikashukela
Isifo sekhulu lama-21: Uhlobo lwe-1 Diabetes Mellitus Diabetes akusona isifo, kepha indlela yempilo yohlobo 1 sikashukela yisifo esingalapheki, isibalo samacala asikho ngaphezu kwe-10% yenani leziguli ezinesifo sikashukela. ...
Yini ebangela isifo sikashukela ezinganeni, ukuthi siziveza kanjani nokuthi singalapheka
Isifo sikashukela ezinganeni Isifo sikashukela isifo sikashukela kungukuphazamiseka kwemizwa emzimbeni okuhambisana nokukhiqizwa kwe-insulin noma ukuncipha kokuphendula kwamangqamuzana ku-insulin. Lesi sifo sibonisa ngokwanda okungapheli kweglucose yegazi. ...
Izimpawu zesifo sikashukela se-latent Izimpawu zokwelapha kanye nokwelashwa kwe-mellitus yesifo sikashukela esingemuva kungenye yezinkinga ezisheshayo zomuthi wanamuhla. Ngenxa yenani elincane lezimpawu zomtholampilo (noma ukungatholakali kwazo ngokuphelele), kwesinye isikhathi akunakwenzeka ukukhomba ukugula kwezigaba zokuqala. ...
Ukuvimbela isifo sikashukela isifo sikashukela yisifo sohlelo lwe-endocrine, lapho ukuphazamiseka kokudla kwama-carbohydrate, amafutha, amaprotheni nokulinganisela kwamanzi kuphazamisekile khona. ...
Izimpawu zesifo sikashukela emadodeni nakwingozi yayo
Izimpawu zesifo sikashukela emadodeni nasengozini yaso Ake sithi ngaso leso sikhathi ukuthi isifo sikashukela aselapheki. Umgomo wokwelapha ukuguqula ushukela wegazi ngokwejwayelekile, ngamanye amazwi, isinxephezelo sikashukela. ...